gooni's Content - Page 5 - Somali Forum - Somalia Online
Everything posted by gooni
Caption this... Djibouti
gooni replied to Suldaanka's topic in Politics
Yuusuf garaad Waa dubulamaasi qabiilayste ah ilaa yaraanteenii waan naqaanay inuu dab afuuf yahay. Islaantii dagaaladii sokeeye hargaysa ugu dhimatay iyo tii adeerkiis caydiid bateriga ku dilay maxaa farqi ah oo u dhaxeeya? Midna taaladeedu ilmay iga keentay midna madaxaygaba kuma jirto caqli gal ma'ahan. Cinwaanku waa hiilo caadifadaysan. Wuxuu qorayna waa wax kale oo aan waafaqsanayn cinwaankiisa. Waxaa la rabay inuu dhaho Soomaaliya maxay ku falaysaa midnimo? Waa dhexdhexaad boogahoo dhan dhayi kara markaad rabto inaad qiiq isku qariso. Faysal rooble wuxuu farmaajo ku nacay dhiibistii qalbi-dhagax laakiin cid garanaysa ma jirto wuxuu siyaad barre ku nacay. Aragtidayda waxaan is leeyahay waa labo arimood. Midda koowaad Cilmaanigu inta badan istaagay ku xaajoodaan way iska sanifaan dadka. soomaalidu waxay tiraahdaa koobkuu ka dhex arkay. Midda kale oo macquulkaana waxaa weeyaan Sida la sheegay ninmankan waa laandheere waa 8milyan, mana qabo in dhamaantood oday caraba oo miskiina uu kaligiis dhalay. Dadbaan ka maqlay abtir-ahaan waa snm dhalan rogmay alahu-aclam.
Mr.Deni oo Af-labadi Yeeray.
gooni replied to gooni's topic in Politics
Suldaan. Haday self funded yihiin oo 2 milyan oo dollar soo xareeyaan bishii, maxay uga baahan yihiin in beel lamida la habawdo oo dadkooda ka fogayso? Mise waxaad leedahay in loo taliyo mooyee canshuur ayaga kaligood iskama qaadi karaan? Maxaa diiday inay kula noolaadaan garoowe self funded oo la wada ogyahay inay wax ku leeyihiin? Wax qarsoon ma'ahan in snm xuduud loo diray dad badana damiirkoodii ka iibsatay. Ogowna waligaa inta snm madaxa ka taabatay kaliya ma'ahan reer ssc. Dhanka siyaasada wax wayn bay u tahay snm xuduudkaan joognaa ssc la'aanteed warqad dhinac jeexan bay jabuuti la imaan lahayd maanta waligayna waan ogaa cawaaqibkeeda. Waxba kama qabo inaad meelaha qaar iga gar leedahay.
Maakhir Farmaajo inuu wax dhaqaajiyo waa ka daacad gudaha iyo dibadda labadaba wuu ka iibiyay, muhiimaduna waa intaas aragtidayda. Snm waa dhaqaale doon intiisa badana dhaqaalahaas waxay ku laaluushaan gobolada SSC. Hadii jabhad si dhaba ugasoo horjeeda ka kacdo goboladaas miiska wadahadalada waxay lasoo fariisan lahaayeen labo ama hal warqad kaliya lagumana wareereen. Waa shaqo ay puntland dayacday waana ceeb in hadaladooda loo dhagaysto sidii gabar masayrtay. Waxaad ogaataa waraaqaha ay hadda wataan waa xuduudkii ingiriiska waa waraaqo badan oo aysan ahayn inay miiska keenaan. Nimankan kasoo jeeda ssc oo garab socda snm ayagu waa hunguri, loomana qariyo inay anfac kula joogaan ayagoo ag taagan bay u sheegaan. Ma oga cawaaqibka ay leedahay arrinta ay ku dhex jiraan. Mulaca caruurtu way ku ciyaartaa asagana waa u qur-gooyo waa dalkii awoowe usuu dhintay waxa ay ku cayaarayaan. Su'aashaada aragtidayda. Farmaajo mudo kordhinta waxaa uga fiican doorasho sida mucaaradku doonayo ku dhacda siday doonto ha noqoto. Sababtuna waxay tahay mucaaradku waa qabiil soocan oo qabyaalad ku hadlaya, sidaa daraadeed waa fursad aysan kula tartami karin. Khaladka farmaajo. Farmaajo khaladkiisa ugu wayn waxaa weeye inuusan qabiilka ka wada tagin oo uu qaato inta dastuurku ogolyahay. Ma yaqaano qabiilada iyo dhaqamadooda waa ciyaal banaadirkii hore. Tusaale. Puntland intay asaga iska celinaysay bay sii dayacantay nin la hubana looma dhiibin sanadkaan. Reer puntland waxay jecel yihiin cid madaxa ka dhunkanta oo ku dhaha boqorow xagee reerka u rarnaa? way kuu godlanayaan waana intay sugayaan cashada ayagaa bixinaya adoon ogayn.
gooni replied to galbeedi's topic in Politics
Koonfurta, wax midnimo ka yar lama imaan karto taas waa la ogaa. Snm'na hanala raali geliyo intaanan fariisan waxaan ahayn waligood lama imaan Qaybta wax wada qaybsigu yaa ugu roon lakiin ma soo saari karaan passport labo calan ku sawiran yahay oo labada shacab ku dhoofaan? Intaysan aasin wada-hadalka waxay la dar-daarmaan gudiga kala taga oo ay ka codsadaan inay soo qufaan dhawr sano ka dib. Habartaas luuqada ingiriiska ku hadlaysa yaa u talisa ragaa meesha maraya dhamaantood, been idiin sheegi maayee mid wax kala goyn kara meesha ma imaan waligoodna kama dhalan. Waa dhaqan ingriis in habar laga dambeeyo aduunkoo dhan bayna kasoo taliyeen.
Faisal Cali Waraabe speaks about goings on in Mogadishu and Djibouti
Cadaymaha aan hayo dhamaantood waa faqash sources. You won't believe me.
gooni posted a topic in Politics
Garoowe oo uu ka qodbaynayo bay snm 30km u jiraan, af-hayeena wuu u noqday shalay markii federaalku daawada geeyay buuhoodle iyo badhan. Xuduudka uu xog ogaalka u yahay xagee ku yaal? Af hayeenka baarlamaanku wuxuu ka cod xildhibaanada inaysan wax su'aala waydiin madaxwenaha oo dhidid badan ka muuqdo darteed
My dear do you read Somali language? The best sources is truth and will not make you happy. If you see someone his father died that war, before you wipe his tears. ask him, did his fother killed someone? Sure he will say no. because nobody likes to be son of the killer we are all innocent. Civil war no winners or losers but snm must stop crying as soon as they can The tutsi are leaders of the nation today and move on, they don't separated their country. Do you know the reasons? Because they have a real history not the one you looking for.
Haa walaale waa sidaad u sheegtay qosolka kaliya ka reeb. Ciidanku asagaa iska bur buray waxayna ku kala biireen qabiiladoodii intii dagaalada sokeeye ku dhimatay mooyee, wixii soo haray ayagoon guno hawl-gab qaadan oo duqoobay bay meel kasta ku noolyihiin warayso. Ma jirto ciidan iyo maxaabiis snm gacantooda galay intaan ogahay Wixii dhicidii xamar ka dambaysay magacyada mujaahidiintu way bateen xoriyadiina way dhalatay dadkuna ayagoo fadhiya bay wax badan qoreen waa intaas casharka beenta ah oo caruurta loo dhigo.
Cimrigu waa waxa kaliya oo markuu siyaado is dhima. Snm waxaa badbaadin kara dhalinyaro maskax cusub wadata. Saleebaan-gaal, adna iyo muuse biixi waxba u keeni maayaan waana shir tacab khasaara. Khudbadooda dhagaysta markuu shirku dhamaado hadii alle idmo. Waxay oran doonaan si gaara yaan beesha caalamka u qaabilnay waxbaana kala socon doona, sodonka sano ee soo socda. Cadaawad aan shacabkoodu qabin bay gaalada ka iibinayaan waa macruuf la wada ogyahay. Tan caasumada kuma qancayaan aragtidayda. Hogaanka sare ee qowmiyadoo dhana, kalsoonideeda waa in la baraa wakhti aad u dheer bay u baahantahay. Waa laga yaabaa in yar oo isku habara inay cod iyo qof ku doortaan oo qudheedii dulum looga kala tagay. Warkayga markaan soo koobo sawirka ay gaalka la galaan yaa uga muhiimsan walaalahood soomaaliyeed.
Xaaji Qaybtii 26,aad 21,aad 54,aad 60,aad Wa qaybihii ciidanka soomaaliya ugu qaybsanaa gobolada 60aad waa koonfurta 21aad waa gobolada dhexe 54 aad waa gobalada bari 26 aad waa waqooyi Qaybta ciidanku waa sadex gaas oo laysku daray. Gaaskuna waa sadex guuto Qaybtu waxay noqon kartaa ilaa dhawr iyo toban kun. Waqooyigu waxba kama duwanayn qaybaha kale marka laga reebo difaaca cirka oo aad loo xoojiyay dagaaladii Ethiopia iyo ayadoo ahayd caasimadii 2aad ee soomaliya. Laakiin markay snm doonayso inay na barto mujaahidiintooda bir-jeexaa bay wax wayn ka dhigaan Q26aad. Ciidaankaas sidaa u haybaysnaa wuxuu lahaa sirdoon ciidan oo aad u xoog badan. Wuxuu kaloo lahaa policemilatery edaabtiisa iyo dhaqankiisa ilaaliya. Dagaaladii koonfurtu waxay saamaysay ciidamadii oo dhan meel kasta ha joogeen Waxay kala raaceen qabiiladoodii iyo goboladoodii Waligaa ma maqashay xero ciidan oo snm la wareegtay askartiina maxbuus u noqdeen? Ma dhicin ayagoo hubkooda wata bay hor mareen. Arrinta kaliya oo snm ku caqli badnayd waxay ahayd hunguri kama gelin hubka iyo ciidanka ka guuraya Sababtoo ah haday la dagaalami lahaayeen maanta mujaahid la waraysto hargaysa ma joogeen ugu yaraan waa isku dhamaan lahaayeen. Hadaad caruur tihiin iska dhaafa dagaalada iyo cuqdada oo naftiina diintiina iyo dalkiina anfaca. Hadaad dad waa wayn tihiina ciyaalka cuqdada hanaga barina oo ilaahay ka baqa.
Faa'iido nooguma jirto khaas ahaan iyo gaar ahaan inaan taariikh snm caruurta u qurxisay ku haraadno. Labo midkood snm taariikh haka dhigato waa talo nin wayn. Waa nala laayay, oo waa kuwaas lafaheenii, ilaahay xagiisa unbaan ka noolahay inta naga hartay. Waan guulaysanay oo kuwaas lafihii faqashta waana iska xoraynay. Labadaas wixii kasoo hara waa lagu wareerayaa meel loo raacana lama yaqaan. Waligeed ciidan snm leedahay iyo urur ciidamadii soomaaliya ah meel la yaqaan isagama hor imaan. Waydiiya mujaahid aan qayilin. Dhuumaalaysi iyo qoraxdu ha dhacdo buu ahaa dagaalka snm ilaa koonfurta dhacday. Snm waxay xasuuqday is dhex yaacii labo qaxooti, wayna imaan maalin lagala xisaabtamo insha-allah. Qaxootigii degenaa boorame agteeda oo oromo musliimiina ahaa, ayagoo ku raali gelinaya master'kooda mingiste iyo rajiimkii Ethiopia. Iyo qaxootigii somali galbeed oo walaalkeen suldaan janjawiid ugu yeeray. Waa lafahaas waxa ilaa iyo maanta banaanka yaala si ay aqoonsiga uga qayb qaataan.
My dear. No need evidence.Spreading hate and false information omong the people worse than atomic bombs. Am not denying civilian casualties but when you send bullet from your window don't blame kitchen fire to anyone.
Siyad barre never ordered civilian massacre, but there was street war and human shield in the city.he was a patriot wise leader protecting his country any kind of enemy either from locals cowards or outsiders.
Maakhir Waan kugu raacsanahay 100% dadku markuu wax isku dayo ma khasaaro ugu yaraan khibrad bay helaan. Bacaad celintii shalaanbood ilaa maanta waa la dugsadaa geedka tiinka dhegtiisa yaa bacaad laga dhex taagay, waa wax aad u sahlan aadna u faa'iido badan. Reer barigu dad jilicsan ma'ahan waa xalaal quudato hadaad doonayso inaad dulmiga aduunyada taal ka fogaato buurahaas iska fuul, laakiin geed ha isku tiirin dad baa leh oo xabag ka gurta. Mushkilada maamulka puntland yaa dadka been u sheegay waxay is leeyihiin maamul dekad dhisaya tuubo ma alaxami waayin. Intuu farmaajo joogo tuubo lama alxami karo miyuu leeyahay adeer deni?
Don't believe all what you hear.learn the history, which is not very far. The snm history is not good as they tell you.please go home and ask both sides what happened. Waraabe siyaad barre isma aqoon sida uu maanta u hadlana uma hadli karin taas waan hubaa. Dimuquraadiyadu looguma talo galin soomaalida dhaqankeena iyo diinteena ma waafaqsana Shuuciyadu diinteena ma waafaqsana laakiin dhaqankeena way waafaqsantahay waana in lakala baqo. Hadii aad doonaysaan inaad hadalkayga beenisaan ama rumaysaan is waydii labo su'aalood. Wixii siyaad barre ka horeeyay see ahayd soomaalidu intii ka dambeeyayna sidee noqdeen? Nin kastoo markuu siyaad barre dhintay ka dib kuu sheega siyaad barre waan la murmay iyo sidaas yaan kuu iri been buu kuu sheegay. Ninka intaas awooda asagoo hadlin yuu siyaad baŕre dhintay allaha u naxariisto. Maantana dadkii uu ilaalin jiray baa afka furtay oo laga harsan la'yahay.
Abiye Ahmed "Waxaan heshiis ku gaadhnay in laba dal la mideeyo, khayraadka ku jira ka wada faa'iidaysano"
Walaalayaal sii faafiya arrintaas si dadka soomaaliya leh u baraarugaan. Walaalkiin Mudane Faysal Rooble. Dadka soomaaliya leh oo uu aqoonyahanku la hadlayo xagay joogaan? Ma soomaalida jubaland baa? Ma hir-shabeelaa? Ma kuwa puntland baa? Ma snm baa? Ma reer muqdishaa? Ma Onlf baa? Su'aalahaas wuxuu nooga jawaabi lahaa aqoonyahanku markuu asagu wadaniyad leeyahay ama ugu yaraan uu halgankii meel noogu sheego. Laakiin hadda wuxuu la hadlayo waa sheekh shariif iyo CC shakuur, ayagaana looga fadhiyaa inay dhulka iyo badda soomaaliyeed noo ilaaliyaan.
Biyuhu waa nolosha qudheeda maamul tuubo alxami waayay, yaan wax wayn laga sugin, isku tashada ilaahayna tawakala reer ufayn.
Two female singers from Somaliland region in jail for two months without trial after visiting Mogadishu
gooni replied to Saalax's topic in Politics
Mushkilada meeshay ka jirto ma garan karaan. Intaysan CID usoo dirin may is waydiiyaan gabdhuhu maxay xamar ka doonayaan? 200km oo ragii ka tahriibay intii soo hartayna qaad seexiyay, dhaqaale jirin, gabdhuhu ma miiskay dhunkanayaan? Muqdisho gayaan iyo dal baa kajira, haday ka buraanburaan iyo haday ka heesaan aqoonsi soo dhaw fogayn mayso.
Qardho's Shabeel Nagood - 1 teenage boy with 10 teenager girls
Nimankuna shareeco iyo sharci midna ma yaqaanaan. Shareecadu kan dambiga galay kan arkay bay ka hor xukuntaa, macnaha kan sii faafiya hadii ceebu ku jirto. Ciyaalku markay waalidka u baahan yihiin waa markii caqligoodu is badelayo ama teenager'ka ay yihiin. Qof kastaana xasuus gaara bay ku leedahay noloshiisa intuu nool yahay. Ceebta kaliya oo aniga ii muuqata waa kornaylka kaamarada u dhiiba.
gooni replied to Miskiin-Macruuf-Aqiyaar's topic in Politics
Muxuu yahay meeqaamku?! Ilaa iyo hadda wax noo fasira ma hayno si sax ah. Aragtidayda meeqaamka waxay ula jeedaan markaan dhagaystay in badan. Qofkii ku dhashay xarar dheere kii ku dhashay ceel-garas iyo haduu ku dhasho jawiil, kii ku dhasha matabaan. xamar isagaa iska leh, waana inuu helaa xaqiisii qabiilnimo oo dastuurka waafaqsan labada gole la mariyaa madaxweynuhuna saxiixaa. Meeqaamka ay doonayayaan waa sidaas garashadayda. Waa hagaag, anigu waxaan ku dhashay gobol, aabahayna wuxuu ku dhashay xamar. Waxaan isku guri ku dhalanay nin iga xiga muqdisho oo xaquuq qabiilnimo si dastuuri ah ku helay. Sidee xaqaas labo muwaadin caasimadoodii ugu kala yeelan karaan? Muqdisho markii iigu dambaysay waxay ahayd 13 degmo waa wakhti aad u fog waxaan daris la ahaa dad soomaaliyeed oo kala duwan guryaha ay degenaayeen ijaar ma ahayn ayagaa dhistay. Waligay madaxayga ma gelin reer baad marti ugu tahay. Muqdisho hadii reer yeeshay oo waabari, hodan iyo boondheere laga dhex doono gudoomiye usc ku abtirsada haduu doono hobyo haku dhasho caasimad ma noqon karto. Hadii xaafad walba degaan iyo wax qabad ay qofka ku doorataan qabiilna dhinac iska dhigaan tartamaan waa caasimad. Waa tan ugu fiican lagana yaabee aqlibiyada ugu badan inay yeelan lahaayeen wixii 90kii ka dambeeyay ayagoo jahli hadalka aamus ku badelaya. Hadii sanetoro qabyaalad iyo sad bursi ama "baad" lagu siiyo sida farmaajo codsaday, waligood waxay ahaanayaan isbaaro miinaysan meelna la gaari maayo. Waxaan dhagaystay dad ay ku sheegeen aqoonyahan, waxaan dhagaystay oday dhaqameed, waxaan dhagaystay culumo aragtidayda dad soo dhaw ma'ahan. Aqoonyahanku waa inuu yaqaan xisaabta ugu yaraan ku dar iyo ka jar dadka isu yimaada waxaa faa'iidada badan keena dadka yimid magaalo waa tan laga helo qabiil kasta asgoo xor ah la dooran karo waxna dooran karo dhisto kuna ilmo dhalo. Culimadu waa inay taqaano in la adeeco alle iyo rasuul iyo awlu-amri dadkana caqiidadooda hagaajiyaan Oday dhaqameed waa inuu kala saaraa fikirkiisa gaarka ah iyo kan beeshu hoos kasoo dhistay. Intaasu markay saxmaan waa la saxmayaa. Hadii kale dhul banaan ha la raadiyo oo cusub ha lagu dego 4.5 si loo helo caasumad loo wada dhan yahay.
Coward Farmajo chased out of parliament.
gooni replied to Apophis's topic in Politics
Axmed madoobe raguu jubaland usoo diray inay ku matalaan fedaraalka dhexe, waa xaabo dastuur iyo hadalna ma yaqaanaan. Gidaarka jig-jiga yaa lagasoo toosiyay ayagoo afar qad ah.
Dadku markay mansab la yaqaan soo qabteen yaa la aqoon karaa. Dadkii la yaqaanay oo taariikhda fiican waqooyiga ku lahaa waa ka dhinteen alaha u naxariisto dhamaantood. Kuwaan qoraxdu hayso yaa iminka hor taagan taariikh iyo xigmadna loogu imaan maayo. Faysal waraabe haduu shaqo fiican hayn jiray asagaa laga maqli lahaa.
Ninkaan hadalkiisa iyo madixiisu way kala hor maraan Soo ninkii lahaa inta saxaafada isugu yeeray muse biixi yaan maanta u tagay hooyadayna wuu caayay anigana waa isoo dhirbaaxay. Waa ku xumahay inuusan ogayn miisaanka taladuu bixiyo ay leedahay. Allaha caafiyo.
Dadka degan hadii loo daayo aaway caasimadii dalka oo dadka ka dhaxaysay? Gaalnimo iyo caqlimo xumo haysku darsan. Ma waxaad doonaysaa in UUNSI caasumad kasta naloogu dirsado xataa tii aan u dhalanay?
Apo adigu ma reer muqdisho tahay?